Isiko iSonto Lobu-Orthodox, ngokungafani ezinkolweni zobuProthestani, aqaphele ukuba semthethweni kwesakhiwo kuthandazela labafile. Ngakho-ke, ukuba khona ezinsukwini zekhalenda, okhethwe ukukhunjulwa ngomthandazo yokhokho oshonile - hhayi ithuba ngaphakathi isiko Orthodox. Njengomthetho, basuke kuboshelwe iSabatha futhi ngenxa yalokho babizwa ngokuthi UMGQIBELO. Sekukonke kukhona eziyisikhombisa uhlanganise okukodwa usuku wesishiyagalolunye Meyi, akanayo sesibopho ukuthobisa ngoMgqibelo noma iyiphi enye ingxenye ngesonto. Ngolunye lwalezizinsuku, okuzoxoxwa ngezansi, okuthiwa uDemetriyu ngoMgqibelo.
Umlando wokumiswa uDemetriyu ngoMgqibelo
Akubona bonke izinsuku ukukhunjulwa oshonile Kwamiswa ngesikhathi. Ezinye zazo yilezi emdala omunye. UDemetrius yesikhumbuzo ngoMgqibelo, isibonelo, isizathu kwalophiko kwaba notorious Battle of Kulikovo. Ngokokuqala ngqá e ngalolu suku futhi khumbula kuphela lababuleweyo impi amaqhawe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, inkumbulo abavikeli babhubha we lawobaba waqala zicekela phansi, ekugcineni waqala ukukhumbula zonke izinto-Orthodox efile.
Ngenxa yalokho uDemetriyu ngoMgqibelo esasungulwa Prince Dmitriem Donskim, egameni ngalo lethiwa. Kwathi Yiqiniso, hhayi kanye, hhayi ngendlela ethile esemthethweni lokubusa. Inqubo ukuthuthukiswa ukuthi leli siko zenzeka kancane kancane. Kodwa ukuqala kuyinto 1380, lapho wasihlephula ibutho Mamaia. Nge emthandazweni wokubonga ukunqoba Dmitry Donskoy wavakashela zintathu-uSergiyu Lavra, lapho ngaphambili isibusiso le mpi kusukela Umsunguli wesigodlo ka lezindela eSt uSergiyu ka Radonezh. Ndawonye ngomkhuleko wokubonga ikhumbule enkonzweni yesikhumbuzo kwenziwe comrades yabafileyo, okuyisizathu isibe isiko okuphindaphindiwe ngonyaka. ngezinga elingaka uDemetriyu ngoMgqibelo atholwe hhayi ngephutha - enkundleni lwempi ababhubha amashumi ezinkulungwane amasosha kuphela ngohlangothi Russian njengoba kuqhathaniswa ezingeni labantu ngaleso sikhathi iyinombolo enkulu kakhulu. Baningi imikhaya abaye balahlekelwa abathandekayo - obaba, abayeni, bazalwane. Ngakho-ke, injabulo ukunqoba kule mpi abazalwa ahlanganisiwe eRussia kamunyu ukulahlekelwa.
Usuku lokukhumbula lolu suku wakhethwa ngoMgqibelo ngaphambi Okthoba 26 isitayela ubudala, noma 8 Novemba entsha, okungukuthi, ngaphambi komkhosi umfel 'ukholo okukhulu Dimitriya Solunskogo (saint - the ongumvikeli Prince Dmitry Donskoy). Ngakho, ngonyaka odlule imakwe uDemetriyu UMGQIBELO 1 Novemba, futhi kulo nyaka ewela ngosuku 7th. Ngokushesha, kwafika isikhukhula Umkhuba omusha osekelwe wonke dioceses we Russian Church, futhi siqine isiko yesonto.
Njenganoma yimuphi suku luwusuku, uDemetriyu ngoMgqibelo ayegubha ukulila myalo, kuthandazela labafile, ngokuvakashela amangcwaba kanye isidlo esikhethekile yesikhumbuzo. Ngo Folk isiko uDemetriyu ngoMgqibelo sihleli kanye namasiko Slavic ubudala zangaphambi kobuKristu ezihambisana ihlelo amadlozi. Ngokwesibonelo, ngaphezu imithandazo isonto ngenxa yabafileyo, ngosuku olwandulela iSabatha senziwa ukuze ushiye okugeza emanzini ahlanzekile bese imishanelo emisha ye imiphefumulo ihambe. Ngokufanayo, sashiya kwasemini walungisa ngokukhethekile ukuza okhokho babekwazi ukuthola ngokwanele kobusuku etafuleni. Abaphatha ngoba oshonile libhekisela emangcwabeni. Ngokuvamile i-scope ne ubukhulu balo uphawu usuku eRussia ikhombisa ekubumbaneni amasiko amabili - umkhosi lobuqaba yokhokho futhi ngosuku Christian yenkumbulo sabafileyo.
Ngokulinganiswa luyingxenye isiko sesonto, uDemetriyu ngoMgqibelo lutho yesikhumbuzo ekhethekile. Ngayizolo, ngoLwesihlanu ebusuku emasontweni yiyona okuthiwa parastas - yesikhumbuzo ebusuku. Futhi kakhulu ngoMgqibelo ekuseni kwenziwa inkonzo yomngcwabo nge ingoma yokulila. Njengoba iminikelo kuze kube yilolu suku, unquma ubheke imikhiqizo ethempelini, ngaphandle utshwala nenyama.
Ukukhuluma ngokuthi lokho uDemetriyu UMGQIBELO, ntshumayelo esontweni futhi kuqhakambisa isidingo somuntu siqu, hhayi kuphela lapho kukhona khona ithempeli Yonke Imiphefumulo. Ikakhulukazi lokhu kusebenza futhi izihlobo efile eceleni. Empeleni, ngakho-ke, ngokuthi yisikhumbuzo ngoMgqibelo umzali - abakudinga kakhulu uthandazele Phumula lwabazali babo (uma befa) nezinye abathandekayo. Ukuze wenze lokhu, ukusiza abakholwa izincwadi zemikhuleko zesonto mithandazo ekhethekile ngendlela yesiko lesonto.
Biblical incazelo mfanekiso. Emfanekisweni eziseBhayibhelini izingane
Mukachevo. Ukuzijabulisa kwedolobha elihle kakhulu
I strip on the nail, amachashazi mhlophe noma lube mnyama - kanti kusho ukuthini?
Izimfihlo amaphupho: yini amaphupho nyangazonke igazi esihambisana nabo, nokuthi ingabe uyafisa yini ukulalela labo amaphupho?
Ihhotela Cosy Twenty8 Inn Ihhotela 3